1 KỌRINT 9 - Baịbụl Nsọ [Igbo Bible 1988] - (1KỌR 9)
1 KỌRINT 9
Abụ m onyeozi Kraịst, bụrụkwa onye nwe onwe m. Abụkwa m otu nꞌime ndị ji anya ha hụ Jisọs Onyenwe anyị. Ndụ ọhụrụ ahụ unu nwere ugbu a sitekwara nꞌọrụ Onyenwe anyị m rụrụ nꞌetiti unu.
Ọ bụrụ na ndị ọzọ asị na m abụghị onyeozi Kraịst, unu onwe unu maara na m bụ onyeozi Kraịst, nꞌihi na ọ bụ site nꞌọrụ m, dị ka onyeozi ya, ka unu ji bụrụ ndị kwere na Kraịst.
Mgbe ọ bụla ndị mmadụ na-ajụ ajụjụ banyere ihe m bụ, ihe a bụ ọsịsa m na-enye ha.
Ọ̀ bụ na o kwesịghị ekwesị na a ga-enye m ihe ruru m dị ka onyeozi Kraịst? Ọ̀ ga-abụ na enweghị m ike ịbata nꞌụlọ unu nọnyere unu, ka unu jiri nri unu zụọ m, dị ka ndị ozi Kraịst ọzọ na-eme?
A sịkwa na m nwere nwụnye, onye bụ onye Kraịst, ọ̀ bụ na m enweghị ike iduru ya gaa ebe ọ bụla m na-aga dị ka ndị ozi ọzọ na-eme, na dị ka ụmụnne Onyenwe anyị na Pita na-emekwa?
Ọ̀ ga-abụ nanị mụ na Banabas ga-anọgide na-arụpụtara onwe anyị ihe anyị ga na-eri, mgbe unu na-egboro ndị ọzọ mkpa ha?
Olee onye agha unu maara nke na-esi nꞌakpa ya akwụ onwe ya ụgwọ ọnwa? Ka ọ̀ dị onye ọrụ ubi unu maara nke na-adịghị eri mkpụrụ e si nꞌubi ya weta? Olee onye ọzụzụ atụrụ unu maara nke na-adịghị aṅụ mmiri ara e si nꞌatụrụ ọ na-azụ apịpụta?
Nꞌezie, anaghị m ekwu ihe a nꞌihi na ha bụ ihe na-eme ụbọchị nile nꞌetiti ndị mmadụ, kama akwụkwọ nsọ kwagidekwara ihe ndị a.
Ma unu maara na ndị na-arụ ọrụ nꞌụlọ nsọ ukwu Chineke na-esi nꞌụlọ nsọ ahụ na-eweta ihe ha na-eri. Otu a kwa, ndị nchụaja na-eketakwa oke nꞌụfọdụ ihe ha ji chụọ aja.
Nꞌotu aka ahụ kwa, Chineke ekwuola na ndị nile na-ekwusa ozi ọma ya ga-esi nꞌozi ọma eweta nri ha ga-eri.
Ma ajụbeghị m unu ihe ọ bụla. Nꞌeziokwu, anaghị m ede akwụkwọ a ime ka unu bido izitere m ihe. Ọ ga-akara m mma na m nwụrụ karịa na m ga-ana unu ihe ọ bụla nꞌihi ozi ọma m na-ekwusara unu! Nke a bụ ihe m ji anya isi!
A sị na m ji aka m họpụta onwe m ịrụ ọrụ a, agaara m enwe olileanya na Chineke ga-akwụ m ụgwọ ọnwa. Ma o sighị otu a dịrị. Ọ bụ Chineke nꞌonwe ya họpụtara m, nyefee m ọrụ nꞌaka. Ya mere, ọ bụ ọrụ nke m na-aghaghị ịrụ.
Ebe m na-arụ ya dị ka ọrụ m na-aghaghị ịrụ, gịnị bụ ụgwọ ọrụ m? Ụgwọ ọrụ m bụ ọṅụ m na-enwe site nꞌizisa ozi ọma a, na-anaghị onye ọ bụla ụgwọ ọrụ ọ bụla, ma ọ bụ ihe ruru m.
Mgbe ọ bụla m bịara nꞌetiti ndị Juu ana m eme dị ka onye Juu, ka m nwee ike nwetara Kraịst ụfọdụ nꞌime ha. Ọ bụ ezie na anọghị m nꞌokpuru iwu Mosisi, ma mgbe m nọ nꞌetiti ndị mba ọzọ ndị na-ebi ndụ dị ka usoro okpukpe iwu ndị Juu si dị, ana m emekwa dị ka m bụ otu nꞌime ndị nọ nꞌokpuru iwu, ka m si otu a nwee ike ikwusara ha ozi ọma, inyere ha aka.
Otu aka ahụ kwa, mgbe mụ na ndị mba ọzọ na-anọghị nꞌokpuru iwu nọkọrọ, ana m eme dị ka ha si eme ka m nwee ike site nꞌụzọ dị otu a mee ka ha mata Kraịst. Ma nke a apụtaghị na m na-akwụsị ime ihe Chineke na-achọ. Mba! Ana m emekwarị dị ka onye nọ nꞌokpuru iwu Kraịst.
Unu maara na mgbe ọtụtụ mmadụ na-agba ọsọ, nꞌoge a na-agba ọsọ ịsọ mpi, ọ bụ otu onye nanị na-enwe ihe onyinye nke mbụ. Ya mere, gbasienụ ọsọ ike, ka unu nweta ụdị onyinye ahụ.
Ọ bụ nke a mere m ji na-agba ọsọ a na-eleghị anya nꞌazụ, tutuu ruo mgbe m ruru na njedebe ije ahụ. Ana m alụsi ọgụ ike ka m nwee ike merie, dị ka ọkụ ọkpọ nke na-adịghị akụjọ akụjọ.
1 KỌRINT 9:1
1 KỌRINT 9:2
1 KỌRINT 9:3
1 KỌRINT 9:4
1 KỌRINT 9:5
1 KỌRINT 9:6
1 KỌRINT 9:7
1 KỌRINT 9:8
1 KỌRINT 9:13
1 KỌRINT 9:14
1 KỌRINT 9:15
1 KỌRINT 9:17
1 KỌRINT 9:18
1 KỌRINT 9:20
1 KỌRINT 9:21
1 KỌRINT 9:24
1 KỌRINT 9:26